polyester လေအေးပေးစက် filter ကိုကွက် - တရုတ် Zhejiang Tiantai Yongzhu Fliter
polyester Anti-ငြိမ်ဆေးထိုးအပ်ရွေးကောက်ခံနှင့်အတူ blended (ခံစားရတယ် ...
လေကြောင်းအခွအေနေ Filter ကို mesh
သင့်ရဲ့ရေကြောင်းအမှတ်အသားဟာစက္ဏူထူအပေါ်ပုံနှိပ်နိုင်ပါတယ် 4. ထို့နောက်ပလပ်စတစ်အိတ်များတွင်မီတာ၏နံပါတ်နှင့်သင်၏အမှတ်တံဆိပ် 3. ရေစိုခံ sailcloth နှင့်အတူ 2. စက္ဏူထူဟာကွက်ပေါ်ပုံနှိပ်နိုင်ပါတယ်, လိပ်ထဲမှာ 1.first
နမူနာ: 1-3days, အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကုန်ပစ္စည်းများအချိန်: 10-20days သို့မဟုတ်အရေအတွက်နှုန်း
အဲယားကွန်း mesh Filter
နိုင်လွန် monofilament ကွက်၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:
1) ပစ္စည်း: 100% နိုင်လွန်
2) ယက်လုပ်ခြင်း: ရိုးရိုးရက်
3) ကွက် Count: 4T ~ 140T (10mesh ~ 355 ကွက် / လက်မ) / စင်တီမီတာ mesh
4) မက်စ်။ width: 365cm (143 လက်မ)
5) အရောငျ: White (စိတ်ကြိုက်)
6) ကွက်ဖွင့်ပွဲ: 30-1500um
နိုင်လွန် monofilament ကွက်များ၏ applications:
filter: wide, (Wide အစားအစာ filtration နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း filter ကိုအတွက်အသုံးပြု) filtration နှင့်ခွဲခြာစက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်ဒေသများအတွက်အသုံးပြုရေနံ, ဓာတု, သတ္တုဗေဒ, ဘိလပ်မြေ, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာ dedusting နှင့်သတ္တုတွင်း၏စက်မှုလုပ်ငန်းများ။ Filtration နှုန်းထားများ 27% ကနေ 78% အထိရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောကြိတ် filtering နှင့်မုန့်ညက်ကြိတ်, ကြိတ်နှင့်အခြားသီးနှံကြိတ်စားစရာဘို့စက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်။ ဂလူးကို့စထုတ်လုပ်မှု, နို့မှုန့်, ပဲပုပ်နို့စသည်တို့ကဲ့သို့ပင်
လေကြောင်းခရီးဖြင့်သို့မဟုတ်ပင်လယ်နားမှာက shiped ကြီးမားသောအရေအတွက်, 2.for
အမိန့်တင်ပို့ခဲ့ပြီးပြီးနောက် 3.tracking အရေအတွက်ကသငျသညျကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးပါလိမ့်မည်
Tiantai Yongzhu စက်ရုံ Filter ထက်ပိုမို 15 နှစ်များအတွက်လေအေးပေးစက် filter ကိုကွက်အောင်အတွက်အထူးပြုခဲ့ပါသည်, ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူရှိကောင်းတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပါလိမ့်မယ်ကောင်းသော price.hope နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်အောင်ဘယ်လိုသိကြ၏။
သငျသညျကွောငျးသိရအဖြစ်ကျနော်တို့ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးကောင်းနှင့်အတူစျေးကွက်အနိုင်ရ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကပေးသောစျေးနှုန်းအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့အမိန့်အရေအတွက်ဆွဲဆောင်မှုလျှင်သို့သော်ငါတို့သည်သင်တို့အထူးလျှော့စျေးပေးနိုင်ပါသည်။
5.Can သင် OEM ဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိ?
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဖောက်သည်များအတွက် OEM န်ဆောင်မှုကိုပေး။
ယခင်: polypropylene လေအေးပေးစက် filter ကိုကွက်
35ppi Grey ကရောင်းချဖောက်ထား air ကို-အခြေအနေ mesh Filter ကျူးဧသောအသံကို
Compressed Air လေကြောင်းလိုင်းသည်လေကြောင်းလိုင်း Filter ကို
ပထမဦးစွာအဆင့် Filtration သည် Air ကို Filter ကို
Air ကို Filtration
air ကို Filtration System ကို
Antistatic polyester မီဒီယာ Pleated air ကို Filtration
Black က polypropylene air ကိုစိစစ်မှုများ
ဖုန်ကောက်ခံရေး Glass ကို Fiber အပ် air ကို Bag သည်အိတ် Filter ကို Filter ခံစားခဲ့
Grey က air ကို Filter ကို
နိုင်လွန် Air ကိုအခြေအနေကွက်
နိုင်လွန်အဖြူ / Black ကလေအေးပေးစက်စိစစ်မှုများ
polyester Air ကိုအခြေအနေကွက်
polyester Air ကို-Conditon mesh Filter
PP air ကိုအခြေအနေကွက်
PP White ကလေအေးပေးစက်စိစစ်မှုများ
PP အဖြူ / Black ကလေအေးပေးစက်စိစစ်မှုများ